Calaamadda Lingerie-ga waxay ka caawisaa dumarka in laga baadho kansarka naasaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Calaamadda Lingerie-ga waxay ka caawisaa dumarka in laga baadho kansarka naasaha
I jecel - Logo in Purple
Iyada oo lagu sharfayo Bisha Wacyigelinta Kansarka Naasaha, sumadda dharka iyo tafaariiqda khadka tooska ah ee Adore Me waxay iskaashi la sameeyeen Ururka Kansarka Mareykanka si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan muhiimada ay leedahay in la baaro.
2020-gaar ahaan inta lagu guda jiro qaybaha ugu xun ee masiibada-waxaa jiray hoos u dhac 60% ah heerka baarista kansarka naasaha sanadlaha ah. Mammograms waa habka ugu waxtarka badan ee lagu ogaado kansarka naasaha marxaladihiisa ugu horreeya-iyo sababta oo ah haween aad u badan ayaa seegay raajada naasaha sanadlaha ah, waxaa la saadaaliyay inay kor u kac weyn u tahay kiisaska aan la ogaanin 2021.
Si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan muhiimada ay leedahay in la iska baaro, Adore Me waxa uu ka qayb qaatay samaynta Ururka Kansarka ee Ururka Kansarka Maraykanka ee Socodka Kansarka Naasaha ee Bartamaha Park. "Waxay ahayd wax aad u wanaagsan inaan aragno kooxaheena kala duwan oo lacag ururinaya guud ahaan shirkadda, la falgalaya kuwa ka badbaaday kansarka naasaha, iyo dhageysiga sheekooyinkooda. Waxaan xitaa teendho ku haysannay socodka si aan u siino ka-qaybgalayaasha xirmooyin rajabeeto ah oo bilaash ah, "ayuu yiri Chloé Chanudet, Madaxa Suuqgeynta ee Adore Me. "Kansarka naasku waa sababta Adore Me uu had iyo jeer ku xirnaa qalbiyadeena, waxaanan sii wadi doonaa had iyo jeer wada hadalka baaritaanka -inta lagu jiro iyo ka dib Bisha Wacyigelinta Kansarka Naasaha."
Iskaashiga Adore Me waxa kale oo ka mid ahaa tabarucaad toos ah oo la siiyo Ururka Kansarka Maraykanka, lacag ururinta guud ee shirkadda, iyo isgaarsiinta malaayiin macaamiisha Adore Me ah oo ku saabsan muhiimada ay leedahay in la baaro. "Ururka Kansarka Mareykanka wuxuu u mahadcelinayaa taageerada Adore Me, kaas oo ku dhiirigeliyay macaamiisha iyo beelaha inay ka qayb qaataan kor u qaadista wacyiga iyo lacagaha lagu joojinayo kansarka naasaha iyada oo loo marayo Making Strides Against Cancer Cancer," ayuu yiri Meagan Hallworth, Maamulaha Horumarinta Sare ee Ururka Kansarka Maraykanka. "Waan ku faraxsanahay iskaashigan, waxaana si wadajir ah u dabaaldegi doonaa kuwa badbaaday iyo kuwa horumaray, waxaanan caawin doonnaa maalgelinta mustaqbalka cilmi-baarista iyo barnaamijyada kansarka naasaha."
Ururka Kansarka Maraykanku wuxuu kula talinayaa haweenka da'doodu ka weyn tahay 40 jir inay jadwal u sameeyaan raajada naasaha sannad kasta, iyo haweenka da'doodu ka weyn tahay 20 jir inay sameeyaan baaritaanka naaska naaska bishiiba mar.